Mgbawa Ọdịnaya Ahịa | Martech Zone
Ngalaba ahia na ire ahia na-aru ahia oge nile… o di nfe karie ire ahia gi mgbe i nwere nlezianya nke ndi ahia, ihe osise ndi ozo, ihe omumu, ozi email na akwukwo ndi ozo iji nyere aka zuta ndi zụrụ ahia. Ugbu a ọdịnaya dị nyocha na ikekọrịta site na web, ọ bụ ezie na anyị ga-eweta ụfọdụ ụdị aha maka ya… content Marketing. N'ihi na enyere ndị na-azụ ikike ịchọta ozi n'onwe ha, ịre ahịa ọdịnaya bụ isi n'ihi na ọ dị mkpa ịchọta ọdịnaya gị na ọchụchọ yana n'ime netwọkụ nke ndị na-achọ.
Ulo oru di iche iche na achoputa otu ihe nkesa siri ike kwesiri ibu na atụmatụ ahia ha. Ọbụna ụlọ ọrụ ndị isi dị ka Coca-Cola na-akụzi ihe niile na atụmatụ ọdịnaya nwere njikọ. Site na Bluegrass, post ahụ